Duqeyn lala beegsaday xarun Alshabaab – Hornafrik Media Network
Duqeyn lala beegsaday xarun Alshabaab
By Liibaan Nuur	 On Nov 28, 2018
Xarar-dheer (Hornafrik)- Wararka aan ka heleyno degaanka Goodirley oo 10km koonfur kaga beegan degaanka Caad oo hoos yimaada degmada Xarardheere ee gobolka Mudug ayaa sheegayaan in Markale xalay diyaarad dagaal ay halkaasi duqeyn ka geysateen.
Qaar ka mid ah dadka degaanka ayaa xaqiijiyay in markale diyaarad dagaal ay dhowr Madfac ay ku dhufatay saldhig ay leeyihiin Maleeshiyada Al-Shabaab oo ku yaalla degaankaasi.
Duqeynta ayaa dhacday xalay fiidkii, waxaana Mas’uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Mudug ay Hornafrik u xaqiijiyeen in goobta la duqeeyay ay maamulaan Shabaab.
19 Bishaan ayay aheyd markii diyaarado dagaal ay duqeymo xooggan ay la beegsadeen degaanada xalay la duqeeyay, waxaana taliska Mareykanka uu sheegay in duqeyntaasi lagu dilay in ka badan 40 maleeshiyaad.
Mid kamid ah ilaalada Isbitaalka Deva oo Muqdisho lagu dilay
Xildhibaan sheegay in madaxda dalka ay u hanjabeen